कर्पोरेट समाचार अपडेट : Koshi Online
साढे चार अर्बको आइपिओ पाइपलाइनमा
शुक्रबार, ३० साउन, २०७७
काठमाडौं,३० साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढीको साधारण शेयर निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा रहेको बताएको छ । बोर्डले बीमा, लघुवित्त र जलविद्युत र अन्य गरी हालसम्म ४ अर्ब ४५ करो
दिनेश वाओ इनर्जी ड्रिङ्क्सको ब्रान्ड एम्बास्डर
मङ्गलबार, ०६ साउन, २०७७
विराटनगर, ५ साउन । पार्कर खेलमा चार पटक विश्व कीर्तिमान राखेका दिनेश सुनार ‘वाओ’ इनर्जी ड्रिङ्सको ब्रान्ड एम्बास्डर बनेका छन् । दिनेश साहसिक खेल मानिएको पार्करमा रेकर्ड राख्ने पहिलो नेपाली खे
लकडाउनका कारण घट्यो विराटनगर भन्सारको राजस्व
आइतबार, ०४ साउन, २०७७
विराटनगर, ४ साउन । कोरोना महामारीका कारण विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा कमि आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ मा लक्ष्य भन्दा लगभग ४३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो । भन्सारकी सूचना अधि
निसान गाडीमा ‘बाइ नाओ, पे लेटर’ योजना
विराटनगर, २ असार । निसान गाडीको आधिकारीक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले ‘बाइ नाओ पे लेटर ’ योजना ल्याएको छ । बन्दाबंदीको अवस्थामा निसान गाडी खरिद गर्दा ६ महिनासम्मको इएमआइ र ब्याज कम्पनी ले नै व्यहोन
शेयर बजार १५ जेठ सम्म फेरि बन्द
बिहिबार, ०१ जेठ, २०७७
काठमाण्डौ , १ जेठ । लकडाउनमा कडाई भएसँगै बिहीबार देखि शेयर कारोबार १५ जेठ सम्म बन्द भएको छ । .. सरकारको निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्
राहत प्याकेजका लागि दबाब दिन निजी क्षेत्रको काँग्रेससँग आग्रह
विराटनगर , २४ बैसाख । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउनले प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुमा आर्थिक राहत प्याकेजकालागि सरकारलाई दबाब दिन नेपाली काँग्रेससँग आग्रह गरेका छन । नेपाली कांग्रेसले आर्
असरका आधारमा आर्थिक क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरिने
मङ्गलबार, २३ बैशाख, २०७७
विराटनगर, २३ बैसाख । कोरोना संक्रमणले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरीे दिने भन्ने सुविधाबारे राष्ट्र बैंकले योजना निर्माण गर्नेछ ।
सोमबार, २२ बैशाख, २०७७
विराटनगर, २२ बैसाख । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोनाको प्रकोपले धरासायी भएको अर्थतन्त्र जोगाउन विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार
उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई राहत प्याकेज दिनुपर्छ , चन्दप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष – उद्योग वाणिज्य महासंघ
लकडाउनले श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द भएको अवस्था छ । श्रमिकहरुले कामगर्न पाएका छैनन । व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ । नेपालमा मात्र हैन ‘वल्र्डवा
नयाँ योजनामा बजेट छुट्टयाउन राष्ट्र बैंकलाई समस्या
काठमाण्डौ , १९ बैसाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ योजनालाई बजेट छुट्टयाउन नसकिने बताएको छ । चालु योजनाहरु अगाडी बढाउन अहिलेको स्रोत र सीमाहरु अर्याप्त रहेकाले नयाँ योजनकालागि बजेट छुट्टयाउन सक्
लकडाउनमा उपभोग्य बस्तु निःशुल्क होम डेलिभरी गराउँदै इन्जिनियर युवाहरु
रामप्रसाद पौडेल विराटनगर, १२ वैशाख । लकडाउनमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव छ ? चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईंको सेवामा निःशुल्क होमडेलिभरी गर्न इन्जिनियर युवाहरु हाजिर छन् । लकडाउनले गर्दा आवागमनमा
लकडाउनमा सञ्चालन हुन नसक्ने कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन परिपत्र
बिहिबार, ११ बैशाख, २०७७
विराटनगर, ११ बैसाख । प्रदेश १ सरकारले चालु बर्षमा कोरोना संक्रमण रोकथामकालागि भैरहेको लकडाउनले गर्दा सञ्चालन हुननसक्ने कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराएन सबै मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । कोर
विपत्तिमा कालोबजारी गरेमा उद्योग संगठन जिम्मेवार नहुने
विराटनगर , ३ बैसाख । सरकारले जारी गरेको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै लकडाउनमा कालोबजारी गरेमा कसैलाई पनि संरक्षण नगर्ने उद्योग संगठन मोरंगले बताएको छ । लकडाउनमा कालोबजारी भैरहेको भन्ने गुनासो बढन था
केएल दुगड समुहले दियो साढे चार सय घरपरिवारलाई राहत
विराटनगर , १ बैसाख । औधोगिक घराना केएल दुगड समुहले मोरङको बुढीगंगा गाउपालिकामा बस्दै आएका ४ सय ५० परिवारलाई राहत सामाग्री वितरण गरेको छ बुढीगंगा गाउपालिका ५ नम्बर र ४ नम्बर वडा कार्यालयको स
एक नम्बर प्रदेश सरकारलाई भाटभटेनीले दियो २५ लाख
विराटनगर,२६ चैत । भाटभटेनी सुपर मार्केटले एक नम्बर प्रदेश सरकारलाई २५ लाख सहयोग गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ को सरकारलाई कोभिड–१९ को रोकथाम र राहतका लागि २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । विराटनगर स्थित भा
चितवन, ५ चैत । चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा सिटीहल बन्ने भएको छ । ३५ करोड २२ लाख ७० हजारको लागतमा एक हजार क्षमताको सिटीहल निर्माण हुने सङ्घीय शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्या
बीस करोड अनुदानको मिल्क पाउडर परियोजना निर्माणमा ढिलाइ
विराटनगर, ८ फागुन । पहाडी र ग्रामिण क्षेत्रका कृषकहरूसम्म दुग्ध उत्पादनको पहुँच वृद्धि गराउँदै अभावको समयमा सहज रूपमा दूध र दुग्ध पर्दाथको आपूर्ति गराउन एक नम्बर प्रदेश सरकारको बीस करोड अनुदानमा निर्
सुरु भयो विराट एक्स्पो
विराटनगर, २ फागुन । शुक्रबारबाट विराट एक्स्पाे २०७६ सुरु भएको छ । संघिय सरकारका अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेपछि एक्स्पो सुरु भएको हो । विराटनगर–२ को शंकरपुर मार्ग,(विराट नर्सि
उद्योग वाणिज्य संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा विराटनगरका किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा
विराटनगर, १ फागुन । उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनका लागि विराटनगरका उद्योगी किशोर प्रधानले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । बिहीबार विराटनगरमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर
विराट एक्स्पोको तयारी पुरा, ३४० स्टल रहने
विराटनगर, २९ माघ । विराटनगरमा अयोजना गरिने विराट एक्स्पो २०७६ को तयारी पुरा भएको छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले आगामी २ फागुन देखि १० फागुनसम्म आयोजना गरिने ‘विराट एक्स्पो २
विराटनगरमा ‘विराट एक्स्पो २०७६’ हुँदै
विराटनगर, २२ माघ । उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा ‘विराट ट्रेड एक्स्पो २०७६’ (कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी) हुने भएको छ । यही २ फागुनदेखि आर्थिक ‘विकासको मूल आधार, कृषि, पर्यटन, उद्यो
औद्योगिक सुरक्षा तथा वातावरणमा कम असर गर्ने प्रविधि अपनाउन जोड
विराटनगर, ९ माघ । उद्योगलाई सुरक्षित र वातावरणमैत्री तथा कामदारको सुरक्षा पक्ष सुधार हुँदै गएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । वातावरण तथा आर्थिक विकास समाज (सिड)ले सञ्चालन गरेको साधन दक्षता, स्वच्
शेयर बजार : एक सातामा चार अर्ब माथिको कारोवार
काठमाडौं, २६ पुस । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । लगातार ओरालो लागेको बजार पछिल्लो साता करिब १०० बिन्दु माथि पुगेको हो । सो समयमा कारोवारमा समेत नया
शेयर बजार : सातामा झण्डै तीन अर्बको कारोवार
काठमाडौं, १२ पुस । पछिल्लो एकसातामा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक घट्दो क्रममा रह्यो । साताभर कूल १७५ कम्पनीको ८५ लाख ९५ हजार ५३१ कित्ता शेयर दुई अर्ब ८१ करोड ८८ लाख ९२ हजार ६९० मूल्यमा खरिदबिक्र
१० करोड बढी बिगो दाबीसहित भन्सार अधिकृत बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं २७ मंसिर । विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतविरुद्ध १० करोड ६५ लाख ९१ हजार ६०९ रुपैयाँ ९१ पैसा बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा
टेलिकमले ल्यायो तिहार अफर
शुक्रबार, ०८ कार्तिक, २०७६
काठमाडौं ८ कात्तिक । नेपाल टेलिकमले तिहारका साथै छठ र नेपाल संवतको अवसरमा सेवामा विभिन्न छुट उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा बोनस उपलब्ध गराउने भएको छ । योभन्दा पहिलेदेखि नै
नेप्सेको ओरोलो यात्रा जारी, आज पनि घट्यो
काठमाडौं, ९ असोज । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकको ओरालो यात्रा आज पनि कायम रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १.७३ विन्दुले घटेर एक हजार १२९.८० विन्दुमा पुगेको छ । यस्
पर्यटकीय शहर वसन्तपुरमा लोकप्रिय बन्दै अन्नपूर्ण होटल
मङ्गलबार, ०७ असोज, २०७६
वसन्तपुर (तेह्रथुम), ७ असोज । पर्यटकीय गन्तव्य लालीगुराँस नगरपालिकाको वसन्तपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको अन्नपूर्ण होटल स्तरोन्नतिपछि पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । एक दशकदेखि सञ्चालनमा आएको अन्नपूर्ण हो
अंकिता ताम्राकार विराटनगर(रानी) , २५ भदौ । दशैको अवसरमा बिराटनगरमा कोसेली महोत्सव हुने भएको छ । १० देखि १४ असोजसम्म विराटनगर स्थित जैन भवनमा प्रदेश स्तरीय कोसेली महोत्सवको हुने भएको हो । उद्योग सं
वर्ल्डलिंकको चाडपर्व अफर, ग्राहक बन्दा टिभी सेट र नेट टिभी सित्तैमा
मङ्गलबार, २४ भदौ, २०७६
बिराटनगर २४ भदौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले चाडपर्वहरु दसैँ, तिहार र छठको अवसर पारेर बिभिन्न अफर ल्याएको छ । वर्ल्डलिंककको बिराटनगर स्थित एक नम्बर प्रदे्श कार्यालयक
सेयर बजारमा हरियाे बत्ती
काठमाडौं, १७ भदौ । निरन्तर ओरालाे लागेकाे सेयर बजारमा मंगलबार दाेहाेराे अंकले सुधार भएकाे छ । नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । आइतबार र सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से मंगलबार दोहोरो अंक
एनआइसि एसिया बैकमा १ करोड ३१ लाख ५० हजार सम्मको बिमा
रङ्गेली १४ भदौ । चमत्कारीक खाता ल्याएको एनआइसी एसिया बँैकले फेरी नयाँ सुपर चमत्कारिक खाता आफ्ना निक्षेप कर्ताकोलागि ल्याएको छ । २२ औ बािर्षक उत्सवको अवसरमा ३० विशेषता भएका नयाँ सुपर चमत्कारिक बचत खात
टुंगियो एनसेल कर मुद्धा : जानकारी पाएको मितिदेखि मात्र लाभकर तिर्न सर्वाेच्चको आदेश
सोमबार, ०९ भदौ, २०७६
काठमाडौं ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिदेखि मात्रै पूँजीगत लाभकर तिराउनुपर्न
बिहिबार, ०५ भदौ, २०७६
बिराटनगर ५ भदौ । गुणस्तरिय रेडीमेड कपडा तथा फेन्सी सामानहरुको लागि विराटनगरमा ‘वि टाउन फेशनवेयर’ संचालनमा आएको छ । सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय जेन्स कपडाको आइटमहरुको होम डेलिभरी सुबिधासहित ‘वि टाउन फेशन
बिहिबार, ३० साउन, २०७६
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटिडको लाभकरसम्बन्धी विवादको फैसला आगामी भदौ ५ गतेका लागि सरेको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मातला माथेमा र मनोजकुमार शर्म
ट्रिपिङ र लोडसेडिङले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा : समाधान नभए उद्योगको चाबी बुझाउने
विराटनगर । केही समय यता बढेको औद्योगिक लोडसेडिङ र ट्रिपिङका कारण विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी आक्रन्त भएका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले बारम्बार विद्युत अबरोध हुदाँ उत्पादनमा ह्रास
‘क्यालिबर शुज’ बिराटनगर बजारमा
बिराटनगर । केडी कम्पनीबाट उत्पादित ‘क्यालिबर शुज’ अब बिराटनगरमा पनि खरिद गर्न पाइने थालेकाे छ । विराटनगरको ट्राफिक चोकमा गत असारदेखि शोरुम सञ्चालनमा आएपछि नेपालमै उत्पादनहुने ‘क्यालिबर शुज’ खरिद गर्न
सफल पार्टनर्सका व्यवस्थापक तिवारीसंग व्यबसायिक सफलताका विषयमा युवाहरुको छलफल
शुक्रबार, १० साउन, २०७६
विराटनगर । विराटनगरमा अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम बिहीबार हुने “लास्ट थर्सडे” कार्यक्रममा सफल पार्टनर्सका व्यबस्थापक आशुतोष तिवारीले युवाहरुसंग व्यबसायिक सफलताका विषयमा छलफल गरेका छन् । होटेल नमस्क
क्लिन फिड लागु भए व्यवसाय बन्द गर्ने केवल टिभी सेवा प्रदायको चेतावनी
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले सरकारले हचुवाको भरमा क्लिन फिड लागु गर्न लागेको भन्दै उक्त विद्येयक कार्यान्वयनमा ल्याए नेपालमा केवल व्यवसाय नै धराशयी हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालका केवल टिभ
बजेटले प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायी उत्साहित
विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट महत्वकांक्षी भएपनि उद्योग तथा व्यबसाय क्षेत्रको लागि भने सकरात्मक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बजेट वक्तव्य लगत्तै मोरङ व्यापार संघमा संक्षिप्त प्रतिकृय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले व्यवसायी सुमार्गीक
विराटनगरलाई राजधानी बनाउन उद्योगी व्यबसायीको माग
विराटनगर, बैशाख १९ । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी औद्योगिक नगरी विराटनगरलाई नै बनाउन नीजि क्षेत्रले माग गरेको छ । मोर औद्योगिक नगरी विराटनगरलाई नै बनाउन नीजि क्षेत्रले माग गरेको छ । मोरङ व्यापा